Illusion Tranokala - Famolavolana
Tranokala Ny magazine Scene 360 dia namoaka ny Illusion tamin'ny 2008, ary tonga dia tetik'asa mahomby indrindra izy miaraka amin'ny fitsidihana 40 tapitrisa mahery. Ity tranokala ity dia natokana hanehoana famoronana mahatalanjona amin'ny zavakanto, ny endrika endrika ary ny sarimihetsika. Avy amin'ny paty hyperrealistana amin'ny sary mahafinaritra mahavariana, ny fisafidianana lahatsoratra dia matetika no mahatonga ny mpamaky hilaza hoe "WOW!"
Anaran'ny tetikasa : Illusion, Anaran'ny mpamorona : Adriana de Barros, Anaran'ny mpanjifa : Illusion.
Drafitra haino aman-jery nomerika sy haino aman-jery
Tranokala Adriana de Barros Illusion